प्रेम सुनार गुल्मी– अघिल्लो दिन गृहमन्त्रीको राजिनामा माग गर्ने गुल्मीका आन्दोलनकारीले अर्को दिन गुल्मी आएका उनै गृहमन्त्रीलाई नतमस्तक हुँदै फुलमाला र खादाले गरे । भाडगाउँमा काग्रेस नेता चन्द्र केसीको पितृशोकमा सहानुभुति प्रकट गर्न आएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले वेला ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउने विषयमा बोल्नै नहुने विषयमा पनि भाष..
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा गरिएको नियुक्तिलाई..
सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेपछि उनी अयोग्य ठहरिएर पदमुक्त भएका छन..
चिरञ्जीवी न्यौपाने इँटा विकास र समृद्धि यात्राका लागि आवस्यक पर्ने महत्वपूर्ण निर्माण सामग..
तिलकराज भण्डारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४२औं सिनेटले विद्यार्थी निर्वाचनमा उमेदवारको उमेर..
ज्ञानेन्द्र एक पात्र हुन् तर उनका दुईवटा पहिचान छन् । एउटा पूर्वराजा अनि अर्को सामान्य नेपाली नागरिक । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेडसँगै ज्ञानेन्द्रले राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अधिकार नेपाली जनतालाई सुम्पेपछि ज्ञानेन्द्र एक आम नागरिकको रुपमा आएका छन् । भलै हुन सक्छ उनी नेपालको इतिहासका एउटा महत्वपूर्ण पात्र भएकाले उनीप्रतिको ..
शिवराज खड्का ०५२ साल फागुन १ गतेबाट नेकपा (माओवादी) ले थालेको जनयुद्धले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । यस अवधिमा तात्कालीन माओवादी सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक देशको कार्यकारी पदमा आसिन छन् । तर उनलाई उभ्याउने जगमा ओवादी लडाकु केही नेपाली सेनामा छन् भने कैयौं लडाकु तथा कार्यकर्ता वैदेशिक र..
यसपालि पनि गत वर्षझैं इस्वी संवत् २०१७ को आगमनको दिन सामाजिक सञ्जालमा एकाएक टोपीको महिमा छरपस्ट भयो । अनि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु पनि रङ्गीविरङ्गी टोपीले सजिन पुगे । कतिले फोटो खिचाउनकै लागि टोपी धारण गरेको सगर्व उद्घोष गर्दै शुभकामना पनि बाँढे, ‘ह्याप्पी क्याप डे’ भनेर । अर्कातिर बरा विदेशिएका कतिपय युवाहरु भने आफूसँग एकथान ..
प्रदेश होइन समृद्ध नेपालका लागि लडौँ
परिवर्तनको एजेन्डामा हिँडेका थियौँ भने अहिले हामी देशको विकास निर्माण, रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत समग्र आर्थिक विकासका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका हुन्थ्यौँ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ हामी आज पनि उही पुरानै प्रवृत्तिमा छौँ । आज देशमा प्रदेशको लडाइँ चलिरहेको छ । हाम्रो राज्य र नेतृत्वको सबै ध्यान त्यतै छ । देशको ऊर्जाका रुप..
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मुख्य हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले धानेको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा चालीसौँ लाख युवा देशभन्दा बाहिर छन् । जसमध्ये लगभग छत्तीस लाख पचास हजारभन्दा बढी पुरुष र १ लाख पचास हजारभन्दा बढी महिला छन् । यीमध्ये ९६.५५ प्रतिशत पुरुष र ३.४५ प्रतिशत महिला मलेसिया, कुबेत, लेबनानलगायतका देशमा श..
राजनीतिक दलहरू टुट्ने र जुट्ने क्रम नौलो होइन तर पछिल्लो पटक कुनै राजनीतिक दल टुटेको पनि होइन र जुटेको पनि होइन । कुरा यति हो, प्रचण्ड र बाबुरामले एउटा कार्यक्रममा एकैसाथ उपस्थित भएर हामी फेरि जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यो बाटो खुला रहेको कुरा मात्रै सार्वजानिक गरेका हुन् । यस कुराले राजनीतिमा पुनः एकपटक […]
पुस १५ अर्थात् तमु ल्होसार (ल्होछार) नजिकिँदै छ । ल्होसार (ल्होछार) लाई तमु (गुरुङ) जातिको एक महत्वपूर्ण पर्वका रुपमा लिने गरिन्छ । पर्वको अवसरमा शुभकामना दिनेहरु प्रत्यक्ष तथा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिया छन् । यो दिन यस जातिको वर्ग वा वर्ष (बाह्र वर्गचक्र, एक वर्ग एक वर्षमा पूरा हुने) फेरिने भएकाले गुरुङ भाषामा ल्होसार (ल्होछार) भ..
नेपालमा छुवाछूतको सुरुवात लिच्छविकाल (सन् १६२–७८९) बाट भएको पाइन्छ । तर त्यसले संस्थागत मान्यता पाएको थिएन । लिच्छविकालको अन्त्यपछि मल्लकालीन राज्यको स्थापन (सन् ७८९–१७६८) मा भयो । मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले १४३७ मा काठमाडौं राज्यमा हिन्दू धर्मग्रन्थ मनुस्मृतिको आधारमा कठोर प्रकारको हिन्दु वर्णश्रम राज्यव्यवस्था स्थापना गरे ..
डायरी : माओको समाधिमै पुगेर दुई थोपा आँशुसहितको श्रद्धाञ्जलि
कम्युनिस्ट होस् या गैरकम्युनिस्ट, कोही पनि राजनीतिज्ञ चीन भ्रमणमा निस्किएर बेइजिङ पुग्दा तेयनमेन स्क्वायरस्थित माओको समाधिमा पुगेन भने सायद भ्रमण सार्थक भएको ठानिँदैन होला । जर्मनी पुगेर हाइगेटमा माक्र्सलाई नभेट्ने र चीन भ्रमणको क्रममा माओत्सेतुङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलि नगर्ने केको माक्र्सवादी ? हामी त झन् माओवादी । २०औं श..
भौगोलिक हिसाबले सबै भूभागलाई समेट्ने गरी नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजानु राम्रो हुन्छ । यसका लागि ५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । ५ विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रान्त मानेर सङ्घीयतामा जाने हो भने तराई, पहाडी र हिमाली भूभाग सबै प्रदेशमा समान रुपले विभाजन हुनेछ । वर्तमान समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले ल्याएको..
घर, अफिस, कलेज जता पनि राजनीतिक गफ चलिरहँदा प्राय म मौन भएर सुन्छु । बेलाबेलामा वाद विवाद गर्नेहरुको गफ सुनेर झनक्क रिस उठ्छ । तर पनि चुपचाप नै सुनिरहन्छु । आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेताले जे गरे पनि ठीक, अर्काले राम्रो काम गरे पनि बेठिक । त्यस्तै गफमा अल्झिरहेका छन् अहिले युवाहरु । पछिल्लो समय […]
नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट सचेततापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले भएका आन्दोलनका प्रकृतिलाई हेर्दा यसमा व्यवस्था भएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता नै धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ । देशका ठूला मानिएका प्रमुख दलहरूले आफ्नो देशको अवस्थाको मूल्याङ्कन नै न..
क्यान्सर रोगको उपचारका लागि राज्यकोषबाट शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले लिएको रकमका बारेमा पटक–पटक प्रश्नचिह्न उठ्ने गर्छ ।
मङ्सिर १४ गते नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक सदनमा दर्ता गरिसकेपछि ५ नं. प्रदेशमा चक्काजाम, बन्द, हड्ताललगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । सरकारले गरेका काम कारवाहीको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको काम हो । चित्त नबुझेको कुरामा आफ्नै पार्टीको कामको आलोचना गर्नु युवा विद्यार्थीको दायित्व हो । संविधान संशोधनका प्र..
डिसेम्बर महिना सुरु हुनेबित्तिकै संसारमा क्रिसमसको माहौल सुरु हुने गर्दछ । कति मानिसहरुले क्रिसमसलाई बुझेर मान्ने गर्छन् भने कतिले रमाइलो गर्ने दिनका रुपमा लिने गर्दछन् । केही वर्षयता नेपालमा पनि यस उत्सवको प्रभाव पर्न थालेको छ । क्रिसमसको समयमा धेरै सपिङ महलहरुमा क्रिसमस ट्री सजावट हुनेगर्दछ । विभिन्न झिलिमिली बत्तिहरु बाल्ने ग..
सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखामा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा गाउँ टोलमा घुमेर त्यहाँका महिलाहरुको जीवनयापनलाई नजिकबाट हेर्दै छु । araयहाँ महिलाहरुको वास्तविक अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ । महिलाहरु सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक, आर्थिक रुपमा धेरै पछि धकेलिएका छन् । उनीहरुको समस्याला..
ब्रिटिश साम्राज्यको उपनिवेशकालीन समयमा विश्व उपनिवेशको शिकार भइरहेका बेला समेत आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सफल भएको हाम्रो देश नेपाल उपनिवेशकालीन समयको अन्त्य भएपछि भने दलाली र उपनिवेशवादी सोचको शिकार बन्न पुगेको छ । नेतृत्वमा आउने हरेक शासकमा रहेको दलाली सोचका कारण समग्र मुलुक नै यसको शिकार बन्दै आइरहेको छ । वि.सं.२००७ भन्दा पहिले अ..
नयाँ शक्ति र फोरमबीच एकता कति सम्भव ?
केही समयअघि नयाँ शक्ति निर्माणको विषयलाई लिएर चर्चामा रहेका डा. बाबुराम भट्टराई, अहिले नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकताको विषयलाई लिएर चर्चामा छन् । कुनै समय ससंदको ठूलो पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेर देशको कार्यकारी प्रमुखसमेत बनिसकेका भट्टराई अहिले किन आफ्नोभन्दा कम राजनीतिक हैसियत र क्षेत्रीय राजनीतिबाट उद..
मधेसको राजनीति कङ्ग्रेस र एमालेले दिने दयाको भीखजस्तो भएको छ । मधेसकै राजनीतिक अगुवाको माग मधेसकै एनजीओ अगुवाहरूको दृष्टिकोणभन्दा पृथक् छ । मधेसवादी दलले फेरि सङ्घीयता, सीमाङ्कन, नागरिकता विषयक मुद्दामाथिको बहस सुरु गरेका छन् । यसले तिनै मुद्दा कमजोर पो हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यस्तो महसुस गर्नेहरू मधेसी नागरिक कङ्..
संविधान संशोधनको प्रस्तावले देश पूर्णरूपमा अशान्त भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनका लागि विभिन्न दलको दिल्ली दौड भएको रहस्य अब खुल्न थालेको महसुस हुन गइरहेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा दिल्लीलाई रिझाउन सकेसम्म प्रयास हुँदा पनि दिल्ली हुन सकेको थिएन । संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी संख्याले पारित..
देशको विकास हुने या नहुने कुरा राजनीतिक चेतनाले निर्धारण गर्दछ । सुसंष्कृत समाजको निर्माण अथवा अराजक समाजको निर्माण त्यही समाजका प्रतिनिधिले निक्र्यौल गर्दछन् । भोलिको समाज कस्तो बन्दै छ भन्ने कुरा राजनीतिको आधार खोज्दै बामे सर्न आतुर आजको युवाहरुको काँधमा छ । माओ चतुङले “यो संसार अन्तिम अर्थमा युवाहरुको हो ।” भनेझैँ आजका युवाहर..
सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै घर छाडेर यूएई आउने प्रशस्त छन् । आफ्नो मातृभूमिलाई चटक्कै छाडेर मन भारी बनाउँदै यूएई भित्रिएका हामी नेपालीमध्ये केहीको सपना सोचेभन्दा बढी पूरा भएका होलान् । तर कसैको सपनाको त कुरा बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ । त्यसैगरी यहाँ बसेर आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसाको सही तरिकाले [&helli..
प्रचण्डमा देखिएको चामत्कारिक नेतृत्व !
मलुकको राजनीतिक गति अवरोधलाई अन्त्य गर्न सबै नेतृत्व सक्षम हुन सक्दैनन् । यसका लागि नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणसँगै अतिरक्त प्रतिभाको पनि आवश्यकता पर्छ । यस्तो गुणलाई चमत्कारी गुण भनिन्छ । राजनीतिमा यसलाई चमत्कारी निर्णायक शासन पनि भन्दछन् । यो गुण प्रचण्डमा देखा परेको छ । यसलाई सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ । भर्खरै भारतीय प..